लोक गीतलाई पाखेले सुन्ने गीत भन्दा आफ्नै आमालाई हेपेको जस्तो लाग्छ - बसन्त थापा
गफगाफ - युवा पुस्तामा गीत संगीत प्रतिको लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बिढिरहेको छ । तर अन्य गीत संगीतका तुलनामा लोक गीत संगीत प्रतिको मोह न्युन देखिन्छ । हुनत लोक गीत संगीतमा पनि चासो राख्ने युबा जमात छुट्टै छन् । तर पप तथा आधुनिकका साथै बिदेशी गीत संगीत मन पराउने व्यक्तिहरुले लोकगीत संगीतलाई भने बेवास्ता गरेको पनि देखिने गरेको छ । हुन त सबै गीत संगीतमा आ आफ्नै मौलिकता भल्किएको हुन्छ हामीले लोक गीत संगीतका क्षेत्रबाट सांगीतिक क्षेत्रलाई योगदा पुर्याउने सर्जक बसन्त थापा सँग कुराकनी गरका थियौ ’बाग्लुङ्ग बजारमा’, ’आज सँगै’, ’झ्याउरे जिते’ सँगै दर्जनौ सफल लोक गीतहरुमा उनले स्वर दिइ सकेका छन् ।
बसन्त थापालाई दर्शक तथा श्रोताहरुले गायक साथै मोडलको रुपमा पनि चिन्नुहुन्छ तपाइँ आफुले आफुलाई चाहि कसरी चिन्नु भएको छ ?
सरस्वतीको अपमान नगरौ, हुन त आवाज पनि सरस्वतीले नै दिनु भएको हो । म पहिला गायक नै हो, त्यस पछि भने आफ्नै गीतहरुमा अभिनय पनि गरिरहेको छु । तसर्थ पनि म आफुलाई गायक मोडल दुवै भन्न रुचाउछु ।
तपाईलाई भन्ने हरुले सुन्दर गायक तथा कलाकार भन्छन नि ?
हाहाहा सुन्दर भनिदिनु भयोे तपाइलाइ धन्यबाद, साथै अरुले पनि सुन्दर भन्नुहुन्छ भने वाँहा हरुलाइ पनि धेरै धेरै धन्यबाद भन्छु । यसरी नै सधै मायाँ गरिदिन आग्रह गर्छु ।
तपाइ गायन क्षेत्रमा कहिलेबाट प्रवेश गर्नु भयो ?
जबदेखि मेरो मानबिय स्वाभाब चेतना भयो तब देखि नै सबै खालको गीत सुन्ने गर्थे, तर फलस्वरूप लोक तथा दोहोरीमा प्रवेश गरेको हु । र मलाई सानो छदा देखि नै लोक गीत संगीत धेरै मन पथ्र्यो
सानोमा कस्तो स्वाभाबको हुनुहुन्थ्यो ?
सानोमा म चन्चले स्वाभाब को थिए, तर अहिले चाहीँ उमेरको हिसाबले अलि सोझो छु रे मेरा शुभ चिन्तक हरुले कहिले काहि भन्नु हुन्छ ।
कहिले काहि चलचित्रमा अभिनय गरौ भन्ने लाग्दैन ?
हा हा हा यो बिषयमा मैले सोचेकै छैन, यो बिषय म भन्दा टाढाको बिषय हो । चलचित्रमा अभिनय गर्ने खासै रहर छैन, रहर भएर मात्र पनि हुदैन त्यो बिषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ ।
तपाँईलाई मन पर्ने केहि लोक गीत संगीतका सर्जकहरुको नाम लिनु पर्दा ?
लोक गीत संगीतमा त्यस्ता धेरै सर्जकहरु हुनुन्छ जस्ले अफुलाइ स्थापित गर्नु भएको छ । त्यसमा पनि लोक बहादुर क्षेत्री, नारायण राईमाझी ,हरिदेबी कोइराला, बिमाकुमारी दुरा, शर्मिला गुरुङ, सावित्री शाह लगायत थुप्रै हुनुहुन्छ ।
गायिका बिष्णु माझि लाई नजर बन्दमा राखिएको भन्ने कुरा बेला बेलामा मिडियामा आउने गरेको छ यसलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ ?
मलाइ लाग्छ मिडियामा आएको यस्तो कुरा गलत हो, २१ औ शताब्दीमा आएर पनि कसैले(कसैलाई नजर बन्दमा राख्न सक्छ र ? बिष्णु जी आफै मिडियामा आउन नचाहनु भएको हो, किनकी उहाको स्वाभाबनै त्यस्तै खालको छ ।
युवा जमातमा लोक गीत संगीत प्रतिको मोह घट्दै गएको हो ?
पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा चुनौती छ , चुनौतीको सामना नगरी अघि बढ्न निकै गाह्रो भइसकेको छ । कहि कतै लोक गीतलाई पाखेहरुले सून्ने खालको गीत भनेर भन्ने गरेको सुनेको पनि छु । तर लोक गीतलाई त्यस दर्जाले हेर्ने हरुले आफ्नै आमालाई समेत त्यहि दर्जा दिएको महसुस हुन्छ ।